एलिशाको भिजेको पुतीमा “आहहहहह – ओहहहहहह - Nepali Sex Tube
कुरा आज भन्दा ७-८ बर्ष अगाडीको हो , मकामको सिलसिलामा ईलाम गएको थिए ।आफ्नो सबै काम सकेर म ईलामबाट बिराटनगर फर्कन बस स्टेण्ड पुगे र विर्तामोड सम्मको टिकट लिए । १० मिनेट जति पर्खे पछि बस पनि आईपुग्यो र सबैजना आ-आफ्नो सिटमा गएर बस्यौ । मेरो छेउको सिट खाली थियो । म आनन्दले बसे र मोबाईल निकालेर गीत सुन्न थाले। गाडी बिस्तारै आफ्नो बाटो लाग्न शुरु गर्यो । २० मिनेट जति गुडे पछि गाडी अचानक रोकियो , यस झ्यालबाट बाहिर हेर्दा थाहा भयो त्यँहा बाट चढ्ने प्यासेन्जर रहेछ ।एक जना १६-१७ बर्षकी केटी गाडीमा चढिन र खाली सिट खोज्न यता उता हेर्न थालिन । मेरो छेउको सिट खाली देखेर त्यो केटी मेरो छेउमा आईन र सोधी ,”दाई , यहाँ बस्दा हुन्छ ?” “हुन्छ , बस न ” भन्दै म अलि छेउ तिर सरे । उनी सिटमा बसिन र आफू सँग भएको झोला सिट माथिको सामान राख्ने ठाउमा राखिन । गाडी आफ्नो सुरमा गुड्दै थियो , बाटो अलि घुमाउरो भएकोले उसको र मेरो पाखुरा कहिले काँही छुन पुग्थ्यो ।
म आफूलाई सम्हाल्थे र उ पनि आफूलाई सम्हाल्न खोज्थिन । कता कता मनमा अनौठो महसुस हुन्थ्यो जब उसको पाखुरा र मेरो पाखुरा जोडिन पुग्थ्यो । १० मिनेट जति चुपचाप नै बसी रहे । के बोल्ने ? के सोध्ने ? मनमा कुरा खेल्दै थियो , एक्कासी ,”दाई कहाँ सम्म जाने हो ?” उनले सोधी ।“बिराटनगर सम्म , अनि तिमी चै कहाँ सम्म नि ?” मैले सोधे । “म दमक सम्म जाने ।” उनले भनी । अब मलाई कुरा गर्ने आँट आयो र सोधे ,”तिम्रो नाम के हो ? अनि ईलाममा के छ तिम्रो ?” “मेरो नाम एलिशा हो , ईलाम मेरो घर हो , अहिले क्याम्पस छुट्टी छ , अनि दिदी भेनाजुकोमा हिडेको , यसो घुमघाम गर्न ।” उनले सहजै जवाफ दिई । “ए ए, अनि कतिमा पढ्छु तिमी ?” मैले सोधे । ” अहिले १२ मा पढ्दैछु । ” उनले भनी । यसरी नै धेरै कुराहरुको आदान प्रदान भयो हामी बिच ।
गाडी निरन्तर गुडीनै रहेको थियो , अब हामी बिच धेरै सहजता भई सकेको थियो । “तपाईको मोबाईलको गीत म पनि सुन्छु नि ” उनले भनी र मेरो ईयरफोनको एउटा तार उनलाई दिए र हामी दुबैले गीत सुन्न थाल्यौ । तार अलि छोटो भएकोले गाडी हल्लिन साथ तार कानबाट निस्कन्थ्यो , यो देखेर मैले भने ,” अलि वर आउन , तार छोटो छ ।” उ अलि वर आईन , अब हाम्रो पाखुरा र तिघ्राहरू एक आपसमा जोडिएको थियो । मनमा एक प्रकारको तरङ उठीरहेको थियो । उ गीत सुन्नमा मग्न थिई , म भने के के सोचीरहेको थिए । अचानक गाडी रोकियो , “चिया नास्ता खाउँ है सबैले ” खलासी कराउन थाल्यो । सबैजना गाडीबाट झर्न थाले र हामी पनि झर्यौ । “तिमी के खान्छौ ? ” मैले सोधे । “हेरौन जे छ त्यही खाउँला नि ” उनले भनी । होटल तिर गयौ र उनले वाई-वाई चाउचाउ अर्डर गरी , मैले चै चिया र चना चिउरा मगाए । खाजा खाईसके पछि पैसा तिर्न काउन्टर तिर लागे , उ पनि मेरो पछि पछि आई । “दाई , चाउचाउको चै म दिन्छु ल ” उनले भनी ।
“भई हाल्यो , म दिन्छु , अब त हामी साथी – साथी हौ नि त , पछि कुनै दिन तिमी तिर्नु नि ” मैले भने । १२० रुपैया दिएर हामी आफ्नो सिटतिर लाग्यौ । पुन: गाडी आफ्नै रफ्तारमा गुड्न थाल्यो । बुधबारे आई पुगे पछि बिर्तामोड बन्द छ रे भन्ने गाईगुँई सुनियो । सबैजना अतालियौ । के को बन्द , कति दिन बन्द ? सबैले सोध्न थाले । “३ दिन बन्द रे ” खलासीले भन्यो । “ला ……. बर्बादै भयो नि , अब म कहाँ जाने ” उनी रुञ्चे स्वरमा कराउन थाली । “किन अतालिएको , अतालिएर केहि हुन्छ , तिमी चिन्ता नगर , केही न केही गरौला नि , पहिला बिर्तामोड त पुगौ ” सान्त्वना दिदै ऊनलाई मैले भने ।
उनी चुप लागि र गीत सुन्न थाली । केहि बेर पछि गाडी चारआलीमा रोकियो । केही मान्छेहरू आएर गाडीको ड्राईभरलाई कराउन थाले । “बन्द भनेर थाहा छैन , गाडी किन चलाको ? आगो लाईदिऊँ ” एक जना बन्दकर्ताले कराउन थाले । “ईलाम देखि आएको हामी , थाहा भएन । यती धेरै प्यासेन्जर छन , केही नगर्नु , बरु गाडी बसपार्कमा राखौला ” ड्राईभरले बुद्धी पुर्याउदै भन्यो । धेरै अनुरोध गरेपछि उनीहरू माने र गाडीलाई बसपार्क सम्म जान दियो । बिस्तारै गाडी बसपार्कमा रोकियो र सबै जना झर्न थाल्यौ । एलिशा र म पनि झर्यौ , “अब कता जाने हामी ?” उनले सोधी । “कता जाने नि , सबै बन्द छ , यतै नजिकै लज होला , त्यतै गएर बस्ने नि अब ” मैले भने । शुरुमा त उनी अप्ठ्यारो मानी तर अन्य कुनै उपाय नभए पछि म सँगै जान राजी भई । मैले यता-उता हेरे , एउटा अलि राम्रो देखिने लज देखे र त्यतै तिर लाग्यौ । लज काउण्टरमा गएर कोठाको कुरा मिलाए र हामी कोठा तिर लाग्यौ । पहिलो तल्लाको कोठा नं. १०३ मैले लिएको थिए ।
चाबी खोलेर कोठा तिर छिर्यौ । २ बेड भाको कोठा सफा र राम्रै थियो । टी. भी. पनि थियो कोठामा । “म हातमुख धोएर फ्रेश हुन्छु , तिमी टी. भी. हेर्दै गर है ” भन्दै म बाथरूम तिर छिरे । निस्कदा पनि उ टी. भी. हेर्दै थिई । “तिमी पनि फ्रेश भई हाल जाउ ” मैले भने र उनी आफ्नो झोला बाट तौलिया निकालेर बाथरूम छिरी । केही क्षणमै उनी बाहिर निस्की , यसो हेरेको उनका सबै लुगा भिजेको देखे ,”के भयो र भिज्यौ ?” मैले सोधे । ” हात धून धारा खोलेको , शावरबाट पानी आयो र भिजे नि ” उनले भनी । “हा हा हा हा ” हामी दुबै जना हाँस्यौ । “ल ल लुगा फेर , चीसो लुगा लाउन हुन्न ” मैले भने । “मैले अरु लुगानै ल्याको छैन , के लाउने नि ” उनले भनी । “हो र , पर्ख , त्यसो भए मेरो टी-शर्ट र हाफपेन्ट लगाउ, अब यही बस्ने त हो नि ” मैले भने । उनले पनि हुन्छ भनी । मैले दिएको टी-शर्ट र हाफपेन्ट लिएर उ बाथरूम छिरी । लुगा फेरेर बाहिर निस्की , म त हेरेको हेरेकै भए । बवाल सेक्सी देखेकी थिई एलिशा । ब्रा नलगाई टी- शर्ट मात्र लगाएको ले उनको सानो सानो दुधको पोका हल्लेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । चीसो पानीले भिजेकोले गर्दा होला , दुधको मुन्टा ठुलो भएर टी-शर्टमा डाम देखिन्थ्यो ।
यो देखेर मलाई खपी नसक्नु भई सकेको थियो । झन त्यसमाथि हाफपेन्ट लगाउदा देखिएको सेतो तिघ्राले त मलाई झनै उकुस मुकुस बनाको थियो । च्याप्प समाएर खाटमा लडाईओरी चिकीहालौ झै भयो मलाई त । तै पनि आफूलाई सम्हाल्न कोशिस गरे र सोधे ” एउटा कुरा सोधौ ?” “भन्नु न , के कुरा ?” उनले भनी । “तिम्रो ब्वाईफ्रेण्ड छ कि छैन ?” मैले सोधे । “अहिले सम्म त छैन , तर २-३ जना केटाले चिठी पठाको थियो , तर मैले रिप्लाई गरेको छुईन ” उनले भनी । “किन नि ?” मैले सोधे । “मनै परेन , त्यती हेण्डसम नै देखिदैन , त्यसैले ” उनले भनी । “त्यसो भए म तिम्रो ब्वाईफ्रेण्ड हुन सक्छु त ?” मैले सोधे । उनी लजाएर भनि , ” तपाईको त होला नि गर्लफ्रेण्ड , फेरि कसरी म पनि हुने त ? ” “मेरो त छैन , तिमी हुने हो भने , बनाउँछु ” मैले भने ।
केहि नबोलि चुपचाप बसी रहीन एलिशा । “मेरो गर्लफ्रेण्ड बन्ने हो त तिमी ” मैले फेरि प्रश्न गरे । फेरि पनि केहि बोलिनन । “I LOVE YOU ELISHA” मैले भने र उसको हात समाए । केही पनि नबोली बसी रहिन , मलाई अझ आँट आयो र उसको कपाल खेलाउन थाले । उनी आँख चिम गरेर बसी रही । मैले बिस्तारै उनलाई अङगालोमा बाँधे अनि कानको छेउमा बिस्तारै किस गरे । उसको शरीरमा पनि तरङ पैदा भएछ क्यार “I LOVE YOU TOO” भनी । म मा अझ बढी आँट बढेर आयो , उसको दुध टी-शर्ट बाहिरबाटै माड्न थाले । एकछिन बाहिरबाटै माडे पछि मैले हात टी-शर्ट भित्र छिराए अनि दुध माड्न थाले । ओ हो , कती मजाको दुध ….. अम्बा जत्रै सानो , हल्का कडा-कडा , सानो दुधको मुण्टो , जब हत्केलामा पर्यो मलाई त खपी नसक्नु नै भयो । माड्न भन्दा पनि खेलाउन नै रमाईलो भई रहेथ्यो मलाई । दुधको मुण्टो हत्केलामा राखेर बिस्तारै बिस्तारै दुधलाई ठिच्न थाले । एलिशालाई पनि आनन्द आएछ क्यार “आहहहहह….. ओहहहहहह….. सीसीसी….. ” कराउन थाली ।
जोशमा अलि कसेर दुध माडेको थिए , “ऐया ……. दुख्यो …….. बिस्तारै गर्नु न ” उनले भनी । मैले आफ्नो जोशलाई सम्हाले र बिस्तारै बिस्तारै माड्न थाले । केहि बेरको दुध खेलाई पछि मैले उनले लगाएको टी-शर्ट खोलिदिए । उसको छातीमा टक्क टाँसेको जस्तो सानो सानो दुधको पोका …… गुलाबी रङको दुधको मुण्टा ……….. मुण्टा वरिपरि हल्का कालो घेरा ……… हल्लाउदा पनि नहल्लिने कडा दुध को पोका ……….. शरीर भरी हजारौ भोल्टको करेण्ट लागे जस्तो सिरिङ भयो । बिस्तारै दुधबाट मेरो हात हटाए अनि मेरो मुख लगेर उसको दुधमा राखे । जिब्रोले हल्का हल्का उसको दुधको मुण्टो खेलाउन थाले । “आहहहहहह……….. ओहहहहहहहहहहहह” कराउन थाली एलिशा । ” मैले हल्का दाँतले उसको मुण्टो टोकीदिए , “दुख्यो …….. ऐया……. के गरेको यस्तो ” एलिशा कराई । “सरी …. सरी ……..” मैले भने । फेरि उसको दुधको मुण्टो चुस्न थाले । केहि बेर चुसे पछि , उसलाई मैले खाटबाट उठ्न लगाए र उनले लगाएको हाफपेन्ट खोल्न थाले । “नाई ….. मलाई लाज लाग्छ । नखोल्नु न …. मैले पेण्टी पनि लगाको छुईन ” उनले भनी ।
मलाई झन खपीनसक्नु भयो , उनको कलिलो पुती हेर्नलाई । “के को लाज नि , तिमी र म त व्वाईफ्रेण्ड – गर्लफ्रेण्ड होईन र ? अनि केको लाज नि ” मैले भने । त्यसपछि उनले केही पनि भनिनन् । मैले बिस्तारै उनको हाफपेन्ट खोलिदिए । साँच्चिकै पेण्टी लगाएकी रहिनछिन एलिशाले । मैले सोचेको भन्दा पनि कलिलो पुती थियो । भर्खरै भुत्ला पलाउन लागेको , हल्का खैरो खैरो रौ , बन्द गरिएको ओठ जस्तो , एक आपसमा टाँसिएको पुतीको छालाहरू , लाग्थ्यो पिसाब फेर्ने दुलो पनि छैन । बिस्तारै उसको पुतीमा मैले मेरो हात पुर्याए । मेरो चोर औला उसको पुतीका टासिएका छालाहरू बीचमा छिराए । उसको पुती भरी पानी नै पानी भईसकेको रहेछ । औला भरी च्याप च्याप हुने गरी लाग्यो । बिस्तारै उसको पुतीको टी. सी. खेलाउन थाले । मकैको दाना जत्रो मात्रै थियो उसको टी. सी. ।
बिस्तारै बिस्तारै खेलाउदै गए , टी. सी. को आकार पनि बढ्न थाल्यो । हल्का रातो – रातो भएर आयो । पुतीमा झन धेरै पानी रसाउन थाल्यो । “आहहहहह…… ओहहहहह…… सीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” कराउन थाली । बिस्तारै मैले मेरो चोर औला उनको पुती भित्र छिराए । ” ऐया…. दुख्यो …. बिस्तारै …….” कराउन थाली । मैले बिस्तारै बिस्तारै मेरो औलाहरू उसको पुती भित्र बाहिर गर्न थाले । उनी पनि कम्मर हल्लाई हल्लाई आनन्द लिन थाली । मेरो दाहिने हात पुती खेलाउन ब्यस्त थियो भने देब्रे हात चै ती कोमल दुध माड्न व्यस्त थियो । ५ मिनेट जति पुती खेलाई सके पछि , मलाई अझ उत्सुकता बढ्न थाल्यो , यो पुतीमा मेरो लाडो छिर्ला कि नछिर्ला ? मेरो लाडो ठन्केर कट्टुनै छेडौला झै भएको थियो । बिस्तारै मैले मेरो सबै लुगा खोले र नाङगो भए । एलिशाले मेरो लाडो देखेर भनि “ओहो , कस्तो ठूलो र लामो तुरी ……, कसरी यत्रो भयो ?” “कसरी हुनु नि , सबैको यस्तै त हो नि ” मैले भने । “हो र ? मैले त केटाकेटीहरूको देखेको, सानो हुन्थ्यो” एलिशाले भनी ।
“बच्चामा त सबैको सानै त हुन्छ नि ” मैले भने । त्यस पछि फेरि उनलाई अंगालो मा हाले र किस गर्न थाले , गालामा , ओठमा , घाँटीमा , छातीमा , कानमा , दुधमा ………. सबै तिर । उनलाई बोकेर खाटमा सुताए अनि बिस्तारै म उनी माथि चढे । फेरि उनको निधारबाट किस गर्दै तल झर्न थाले । निधारमा , नाकमा , आँखामा , ओठमा , घाँटीमा , दुधमा , भुँडीमा , नाईटोमा …… अनि पुतिमा …………। उनको पुतीमा ५-६ चोटि किस गरे पछि , बिस्तारै जिब्रोले उनको पुती खेलाउन थाले । “आहहहहहहह ……….. ओहहहहहहहहहह………. सीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” फेरि एलिशा कराउन थाली ।
जिब्रोले बिस्तारै उनक टी.सी. खेलाउन थाले ……. उनलाई असह्य भएछ क्यारे , मेरो टाउको च्याप्प समाई र मेरो मुख उनको पुतीमा कस्सेर जोतिदिई । मेरो मुख पुरै उनको पुतीमा पर्यो । पुतीको बासनाले झनै मलाई असह्य बनायो र मेरो जिब्रो पुती भित्र छिराउँदै निकाल्दै गर्न थाले । एलिशा अब पुरै बेहोश झै भइसकेकी थिई । पुरै शिथिल शरीर ……. पानी पानी भएको पुती ……. मेरो लाडो त सन्किनु सम्म सन्कियो । म बिस्तारै उठे अनि उनलाई किस गर्न थाले । “एलिशा , अब म चिक्छु ल , अलि अलि दुख्छ , सहनु ल ” मैले भने । “नाई दुख्छ भने त नगर्ने ” उनले भनी । “एकछिन मात्रै हो दुख्ने , त्यसपछि दुख्दैन ” मैले भने ।
उनी चुप चाप बसीरहिन । मैले बिस्तारै उनको तिघ्रालाई फाट्न लगाए । अनि मेरो लाडो लगेर उनको पुती निर राखे । कता कता मलाई पनि डर लागि रहेको थियो । बिस्तारै उनको पुती दुई औलाले हल्का च्याते र लाँडोको टुप्पो लगेर राखे । उनको पुतीको दुलो सानो भएकोले छिर्ला नछिर्ला भन्न सकिरहेको थिईन । अनि बिस्तारै मैले लाडो पुती भित्र छिराउन कोशिश गरे । “ऐया……… दुख्यो ………….. नाई नगर्ने ……. प्लिजऽऽऽऽऽऽ । म सक्दिन सहन ” एलिशा रुन थाली । हतार हतार मैले लाडो निकाले अनि सम्झाउन थाले “बिस्तारै बिस्तारै दुख्न छोड्छ , एकै छिन सहने प्रयास गरन ल ।” “हुन्छ ” रुञ्चे स्वरमा उनले भनि । फेरि मैले बिस्तारै लाडो छिराउने प्रयास गरे ।
१ ईञ्च जति छिराएर भित्र बाहिर गर्न थाले । शुरुमा त “ऐया ….. ऐया ……” भन्दैथिई तर ५-१० पटक छिराए पछि दुख्न कम भएरा होला , कराउन छाडी , बरु “आहहहहहहहहह ……… ओहहहहहहहहह” भन्दै मजा लिन थाली । मैले अझ धेरै छिराउन थाले ….. बिस्तारै बिस्तारै गर्दा पुरै लाडो छिराएरै छाडे । ” दुख्यो ……..” कराईन एलिशा । उनको दुखाईको वास्ता नै नगरी म लाडोलाई भित्र बाहिर गर्न वयस्त भए । ३-४ मिनेट जति चिके पछि , उनलाई पुरै आनन्द आएछ होला , अब त मलाई च्याप्प समाएर ” अझै गर्नु न , छिटो छिटो गर्नुन , भित्र सम्म पुग्ने गरी गर्नु न , मजा आईरहेको छ क्या …… अझै … अझै ……..” कराउन थाली एलिशा । मलाई पनि जोश बढेर आयो , मेरो तागतले भ्याए सम्म बल गरी गरी चिक्न थाले । कोठामा केवल खाटको “ठ्वाक – ठ्वाक ” ,
एलिशाको “आहहहहह – ओहहहहहह” , उनको र मेरो शरीरको घर्षणबाट निस्केको “फ्यात – फ्यात” , भिजेको पुतीमा लाडो छिर्दाको “प्याच – प्याच ” जस्ता आवाजहरू गुञ्जीरहेको थियो । करीब करीब १५ मिनेट जति चिकेपछि , मेरो लाडोले माल ओकल्न लागे जस्तो भयो । “मजा आई रहेको छ तिमीलाई ?” मैले सोधे । “पहिलो पल्ट गरेकोले होला, अलि दुख्यो तर दुखाई भन्दा मजा नै धेरै छ ” एलिशाले भनी । अकस्मात छाँगाबाट खसेको जै भयो र सबै माल उसको पुती भित्रै झारिदिए । म पुरै शिथील भई सकेको थिए । उनको शरीरमाथि नै म बसीरहे । २ मिनेट जति बसे पछि , म उठे । यसो लाडो हेरेको त , मेरो लाडो भरी रगतै रगत थियो ।
तन्ना भरि पनि रगतै रगत थियो । एलिशा पनि ऊठी र हेरी “ओहो ……… रगत कसरी आयो ?” एलिशाले उत्सुकता जगाई । “पहिलो पल्ट गर्दा सबैको रगत आउछ , यस्तै हो शूरुमा ” मैले भने । एलिशा ऊठी र बाथरुम तिर गई , म भने तन्ना निकाल्न थाले । केहिछिन मै एलिशा बाहिर आई र रुञ्चे स्वरमा भनी ” मलाई कस्तो डर लागि राछ , तल त पुरा पोलीराछ , के गर्ने ?” “चिन्ता नलेउ केहि हुन्न , म छु नि ” मैले भने । हामी दुई केही बेर अंगालो मा बाधियौ , किस गर्यौ अनि खाटमा पल्टियौ । केहि बेर कुराकानी भयो , उनी खुशी थिई , म झनै खुशी थिए , टाईट पुती चिक्न पाएकोमा । हामीले दु:ख सुखका कुरा हरू साट्यौ , अनि एकैछिन भएपनि आराम गर्ने सहमती गर्यौ ।
Categories Nepali Sex Story, New Sex Story, Sex Stories, नेपाली यौन कथा, नेपाली सेक्स स्टोरी Post navigation